Waxgarad nabadeyn u tagay deegaanka Dhumay ee gobolka Sool - Halbeeg News
LAASCAANOOD(HALBEEG)- Waxgarad ka kala tagay magaalooyinka Garoowe, Laascaanood iyo Buuhoodle ayaa gaaray deegaanka Dhumay ee Koonfurta gobolka Sool halkaas oo ay dhawaan ka dhaceen dagaallo u dhexeeya labo beelood oo ood wadaag ah.
Odayaal dhaqameedkan ayaa deegaanka u tagay in ay bilaabaan waanwaan lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka dhaxeysa labadan beelood.
Garaad Saleebaan Buraale Aadan oo ka oo ka mid ah waxgaradka tagay deegaanka ayaa sheegay inay dadaal ugu jiran sidii loo dhameyn lahaa colaadda, islamarkana nabad waarta loo dhax dhigii lahaa beelaha walaalaha.
“Waxaan ka kala nimid Garoowe, Laascaanood iyo Buuhoodle. waxaan deegaankan u nimid sidii loo soo afjari lahaa colaaddan ka dhacday Dhumay, waxana ku rajo weynahay in xal loo helo colaadda”ayuu yiri Garaad Saleebaan.
Garaadka ayaa ka dalbaday hay’adaha samofalka inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan dadkii ka barakacay deegannada lagu dagaalamay isagoo sheegay in dadkaas ay hadda ay ku nool yihiin xero barakac oo ay ka sameysteen meel ka baxsan deegaanka lagu dagaalamay.
Deegaanka Dhumay ee gobolka Sool ayaa waxaa dhawaan ka dhacay dagaal galaftay nolosha in ka badan 40 qof halka tiro kalana ay ku dhaawacmeen.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalka keentay magaalada Muqdisho si xaaladooda caafmaad loola tacaalo.
Milkiilihii kooxda Leicester City oo shil diyaradeed ku dhintay